स्वागतम् - Croeso
पेनुसेनान्टाफ, स्नोडनको तल्लो सतहमा रहेको असाध्यै हार्दिक एवं मैत्रीपूर्ण क्याफे हो । यो क्याफे लानबेरीस मार्गमा रहेको रोयल भिक्टोरिया होटलबाट सय गज÷मिटरको दुरीमा अवस्थित छ । यहाँ तपाइले सँधै न्यानो स्वागत प्राप्त गर्नुहुनेछ भने आफू जस्तै रमाइला व्यक्तिहरुसँग भेट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । हाम्रो क्याफेमा चिया, कफि, वाइन, हट चक्लेट र थरिथरिका स्थानीय वियर उपलब्ध छन् । हामीसँग सिमित खानाको मात्र छनोट छ तर तपाईले स्वयं खाजा नास्ता ल्याएर हाम्रो क्याफेमा बसेर खान पनि सक्नुहुन्छ । कृपया ख्याल गर्नुहोस्, हामी, स्नोडन समिटको आगन्तुक केन्द्र र क्याफे होइनौ ।
क्याफे - व्यंजन सूची - आवास - हाम्रो समिक्षा
वेल्स भाषामा येविड्फा भनिने स्नोडन वेल्सकै सबैभन्दा अग्गो हिमाल हो । यसको उचाइ समुन्द्र सतहबाट ३५६० फिट (१०८५ मि.) रहेको छ । स्नोडन ब्रिटेनकै सबैभन्दा व्यस्त हिमाल हो । अति व्यस्त याममा पेनुसेनान्टाफमा जानु हुन्छ भने यो हिमालको व्यस्तता तपाइले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । व्यस्त याम बाहेकका समयमा यो ठाउँ अलि सुनसान हुन्छ । त्यहाँ जान मिल्ने अवस्था भएनभएको थाहा पाउन माउन्टेन सेफ पार्टनरसिप सँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
यहाँ पुग्ने मार्ग यसप्रकार छन्ः लानबेरिसबाट घडिको सुइ अनुसार
यो सबैभन्दा लामो तर सजिलो मार्ग हो । किनभने यो मार्गमा अधिकांश जमिनको सतह त्यति उतार चढाव पूर्ण छैन ।
पीग मार्ग पेनु भञ्ज्याङको कार पार्कबाट शुरु हुन्छ र क्रिबगोचको पूर्वी किनारा बोल्चुमोच (पीग भञ्ज्याङ) सम्म उक्लिन्छ ।
यो मार्ग पनि पेनु भञ्ज्याङको कार पार्कबाट शुरु हुन्छ र स्नोडनको चुचुरासम्म पुग्न सबैभन्दा लोकप्रिय बाटो हो ।
शिखर सम्म पुग्नका लागि ज्यादा रुचाइएको मार्गको रुपमा यसलाई लिइन्छ ।
यसलाई कहिलेकाँही बेड्गलर्ट मार्ग पनि भनिन्छ । यो मार्ग रिड्डु गाउँबाट शुरु हुन्छ ।
स्नोडन रेञ्जर मार्ग
स्नोडन रेञ्जर रेलवे स्टेशन नजिकै लिनक्वेलिन सँगैको युवा छात्राबासबाट स्नोडन रेञ्जर मार्ग ए ४०८५ बाट सुरु हुन्छ ।
१८९४ मा बनाइएका स्नोडन माउन्टेन रेलवे स्नोडनको शिखरसम्म पुग्नमात्र बनाइएको नभइ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पनि बनाइएको हो ।
स्नोडनको शिखरमा पहिलो भवन १८३८ मा बनाइएको हो । नयाँ स्टेशन र क्याफे तीसको दशकको मध्यतिर बनाइएको हो र पोर्टमेरिअन मा इटालियानेट गाउँको रचना गर्ने सर क्लग विलियम एलिसले यसको बनाबट तयार पार्नुभएको हो । स्नोडनको भवन २००६ मा, ढुंगाले पूर्णत ढाकेर हाफोड्इरी भवन पुर्ननिर्माण गरिएको हो, अहिले हामीले त्यही स्वरुप देख्छौ ।
कृपया ख्याल गर्नुहोस् कि स्नोडनको टुप्पामा पाइने सुविधा वर्षैभरि खुल्ला हुँदैनन् र हाफवे हाउसको सानो क्याफे सिजनका बेला खुला रहन्छ भने कहिलेकाँही
सिजन बाहेकको सप्तान्तका दिनमा पनि खुला रहन्छ । पेनुसेनान्टाफ टी हाउस भने वर्षमा ३६५ दिननै खुला रहन्छ ।
स्नोडनको मौसम महिनैपिच्छे, दिनैपिच्छे, घन्टैपिच्छे एवं क्षणभरमै बदलिरहन्छ । यदि तपाइ हिड्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने मौसम कार्यालयको वेभसाइटबाट प्राप्त हुने सहि मौसमी रिपोर्ट लिएर हिड्दा राम्रो हुन्छ । मौसम सम्बन्धी विवरण पेनुसेनान्ट क्याफेको सूचना पाटी, राष्टिय निकुञ्जको मुलद्धार र हिमाली मौसम सूचना केन्द्रबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ख्याल गर्नुहोस्, गाउँ तहमा भन्दा शिखरमा तापमान निकै झरेको हुनसक्छ र तपाई संभावित खराव स्थितिका लागि पनि तयार रहनु आवश्यक हुन्छ । तपाई अनुभवी पदमार्गी, आरोही नभएसम्म खराव मौसमका समयमा हिमालमा जाने दुश्साहस नगर्नुहोस् । हिड्नु अगाडि गंभिर ढंगले विचार गर्नुहोस् ।
स्नोडन क्षेत्रका हिमालहरु हिड्नका लागि उत्कृष्ट छन् । तर हिड्नु अगाडि राम्रोसँग तयारी गर्नु जरुरी छ । सँधै मौसम पूर्वानुमान चेकजाँच गर्नुहोस् र हिमालको टुप्पोको मौसम क्षणभरमै परिवर्तन हुनसक्छ भनेर सचेत रहनुहोस् । तपाइ एक्लै वा समूहमा हिड्नु भएको छ भने तपाईसँग आधारभूत उपकरण हुनैपर्छ । यस्ता उपकरण हिमाली क्षेत्रका पसलहरुमा सहजै उपलब्ध छन् । यस क्षेत्रका धेरै मार्ग कच्ची र ठाडो रहेकाले राम्रो खालको बुटजुत्ता लगाउनु जरुरी छ । निकै हल्का खालका जुत्ता चप्पलको नलगाउनुहोला । यस क्षेत्रमा जाँदा नक्शा, कम्पास, जलरोधक कोट, ट्राउजर, न्यानो कपडा, प्याकिङ खाना र पानी साथै लानुहोला । हिमालको यात्रामा एउटा बाक्लो पत्र भन्दा धेरै पातला पत्र सहज हुन्छन् । लामो यात्राका लागि तपाइलाई तातो पेयपदार्थ, सिठ्ठी, जगेडा ब्याट्री र बल्ब सहित टर्च लाइट, ऊनको टोपी, हिउँदलाइ हुने खालको पञ्जा, ह्याट, घामबाट बचाउने क्रिम र चश्मा आवश्यक हुन्छ । धेरै मान्छेहरु विषम भुमिमा यात्रा गर्छन् । यस्तो ठाउँ स्नोडनमा प्रशस्तै छन् । केही सुगम मार्ग पनि छन् । प्राथमिक उपचार सामग्री साथै राख्नु श्रेयस्कर हुन्छ । हिमाल चढ्ने र झर्ने दुवै बाटा थाहा पाइराख्नुहोस् । यदि तपाई भिन्न बाटो भएर तल झर्नुभयो भने आफ्नो कार वा होटलसम्म पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुहोस् । हिमाल वरिपरि नियमित बस सेवा भएपनि रात्री सेवा उपलब्ध छैन । यात्रा योजनाबारे आफ्नो साथीलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नुहोस् र यात्राबाट फर्केपछि पनि जानकारी दिनुहोस् । हिमालको कतिपय भागमा फोन लाग्दैन । यसको अर्थ जी.पी.एस. पनि कमजोर हुनु हो ।
र क्यामरा नबिर्सनुहोला !
लानबेरिसबाट किएर्नाभोन, बाङ्गोर र कापेल कुरिग हुँदै बेट्वुकोएड सम्म जानका लागि राम्रो स्थानीय बस सेवा उपलब्ध छ । यसैगरी स्नोडनमा शेर्पा शटल बस सेवा पनि छ । यसले स्नोडन वरिपरिका मुख्य प्रवेश मार्गमा यात्रुलाई चढाउने र ओराल्ने गर्दछ ।
लन्डन, मिडल्याण्ड र इंगल्याण्डको उत्तर पश्चिमबाट नियमित रेल सेवा वेल्सको उत्तरी तट, बाङ्गोर सम्म र त्यहाँबाट आङ्ग्लेसे र होलीहेड (जहाँबाट आयरल्याण्डका लागि नौका–फेरि चल्छ) पुगेर टुंगिन्छ ।
स्नोडनको शिर्ष भागसम्म जनतालाइ पुर्याउने स्नोडन माउन्टेन रेलवे बाहेक अलि सानो रेलमार्ग लिनपाडर्न लानबेरिस लेक रेलवे पनि छ जसले लानबेरिसको भिक्टोरिया होटल नजिक हुँदै स्लेट म्युजियम र लिनपाडर्न पुर्याउँछ । वेल्स हाइल्याण्ड रेलवे बेडगलर्ट मुनि किएर्नाभोन हुँदै जान्छ । यो सेवा स्नोडनको पश्चिम पट्टीका केही मार्गहरुमा रोकिदै पोर्थमाडग सम्म अघि बढ्छ । पोर्थमाडगबाट फेस्टिनिओग रेलवे समात्न सकिन्छ जसको यात्रा ब्लाइनाउ फेस्टिनिओग पुगेर टुंगिन्छ । त्यहाँ तपाई सामान्य योजना बनाएर, किएर्नाभोन देखि पोर्थमाडग हुँदै ब्लाइनाउ फेस्टिनिओग, लानडुड्नोको मुख्य चोक र पुनः किएर्नाभोनसम्म शानदार चक्रिय बस यात्रा गर्नसक्नुहुन्छ ।